Oh! Master – Gold Channel Movies
Episode5Apr. 07, 2021
Episode 14 May. 06, 2021
Oh Master(오! 주인님)
Thriller တွေ Psychopath တွေပဲ ကြည့်နေရလို့လောင်နေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အခုကားလေးကိုကြည့်ပါ။ အိုအေစစ်ကားလေးဖြစ်မှာပါ။ ဒိတ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့ thriller ဒရာမာဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာရယ် အချစ်ရိုမန့်တစ်ဟာသဇာတ်ကားတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ပေမဲ့ ဒိတ်မလုပ်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးရယ် တစ်အိမ်တည်းနေရာမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အလွဲတွေကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။
Oh Joo In ဟာ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အချစ်ကားမြူးမြူးလေးတွေမှာ သရုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတာကြောင့် နိုင်ငံအနှံ့က အရွယ်သုံးပါးမရွေးသောအမျိုးသားထုကြီးရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ခံရသူပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒိတ်မလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ နှိမ့်ချတတ်ပြီး သူမရဲ့ ငယ်ဘဝက ဒဏ်ရာတစ်ချို့ကို သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ကာရိုက်တာပါ။
Han Bi Soo ကတော့ အချစ်ကိုမထုတ်ပြတတ်တဲ့ ဇီဇာကြောင် လူပျိုကြီးပါ။ နာမည်ကြီး သည်းထိတ်ရင်ဖိုဒရာမာတွေရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားသူပါ။ သူကလည်း လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေ ရှိနေပြီး ဒိတ်ဖို့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိသူပါ။
ဒီလို လျှို့ဝှက်ချက်ကိုယ်စီနဲ့လူတွေဟာ တစ်အိမ်တည်းမှာ အတူနေမိကြတဲ့အခါ အချင်းချင်းရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ကုစားပေးရင် Relationship တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ ဘယ်လိုသင်ယူကြမလဲ၊ မတူညီတဲ့ ဘဝနှစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုး ချိန်ညှိကြမလဲ ဆိုတာကို ချစ်စဖွယ်ဟာသဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားလို့ GC ပရိတ်သတ်ကြီး အနေနဲ့ လုံးဝကြည့်ရှုသင့်တဲ့ကားလေးပါနော်။ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသာပတေးနေ့တွေမှာ တင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး။
Translated by Hnin Aye Nyein and Youn Kyi Phyu
zawApril 27, 2021Reply
Episode 11 htet tin pay par.
zawApril 20, 2021Reply
Oh! Master ko htet tin pay par…